( ၁၁ ) နှဈသမီးငယျလေးကို သားအိမျခေါငျးကငျဆာကာကှယျဆေး ထိုးပေးရငျးလြှော့ချဖွဈကာ နရောမှာပငျသဆေုံးသှား – Maythadin
( ၁၁ ) နှဈသမီးငယျလေးကို သားအိမျခေါငျးကငျဆာကာကှယျဆေး ထိုးပေးရငျးလြှော့ချဖွဈကာ နရောမှာပငျသဆေုံးသှား
May Thadin | January 23, 2021 | News | No Comments
စိတျမကောငျးစရာပါ ထိုငျးမှာဖွဈသှားတာပါ…..ထိုငျးနိုငျငံ အယုဒ်ဒယခရိုငျ မဟာရတျမွို့ကအသကျ (၁၁ ) နှဈအရှယျသမီးငယျလေးကို
ကြောငျးမှာ ဆရာဝနျတှကေ ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမျခေါငျးကငျဆာကာကှယျဆေးထိုးလိုကျပွီး …သိပျမကွာဘူး ကလေးက ” ရငျဘတျအောငျ့တယျ အောငျ့တယျ ” ဆိုပွီး အနျတယျ သိပျမကွာပါဘူး ကလေးက သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ ။
ပုံမှနျဘာရောဂါအခံမှလညျးမရှိဘူးလို့မိဘတှကေရေးသားထားပါတယျ ။ ဘာ့ကွောငျ့သဆေုံးတာလဲလို့မညျသူမှမှတျခကျြမပေးထားပါဘူး ။စာသငျကြောငျးတှမှော ကာကှယျဆေးတှေ ယခုလို လိုကျပွီးထိုးကွတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနလေား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမျးသပျမိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊
ကလေးဟာအဖြားအနညျးငယျရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ. ၊ မကွာခငျသူ့မှေးနရေ့ောကျတော့မှာဖွဈပါတယျ..ဒါ့ကွောငျ့စာသငျကြောငျးတှမှောဘဲဖွဈဖွဈ , ရပျကှကျထဲမှာဘဲဖွဈဖွဈ ကလေးသူငယျတှအေတှကျ ကာကှယျဆေးထိုးကွရမယျဆိုရငျ
ဆေးရဲ့ အာနိသငျနဲ့ Side – effect ဘေးထှကျဆိုးကြိုးသကျရောကျမှု တှကေိုအရငျလလေ့ာပါတယျ ၊ကိုယျ့သားသမီးကခံနိုငျရညျရှိနိုငျလား ? ဖြားနသေလားပေါ့… စိတျခမြှထိုးခိုငျးပါတယျ
တဈခြို့ကာကှယျဆေးတှကေအရမျးပွငျးထနျတယျလို့သိထားလို့ပါ ….ကိုယျတှကေ ဆရာဝနျမဟုတျတော့ Vaccine တှအေကွောငျးနားမှမလညျတာ ၊ ဒီတော့နီးစပျရာခငျမငျရတဲ့ဆရာဝနျတှကေို မေးရမွနျးရပါတယျ ၊
သခြောမှထိုးခိုငျးပါတယျ….အခုတော့ ဆရာ/မတှကေလညျး တာဝနျပေါ့လြာ့ကွသလို ဆေးဘကျဆိုငျရာဝနျထမျးတှကေလညျး သခြောမစဈမိကွတော့ စတေနာကနေ သုံးဘကျစလုံးယူကြုံးမရ ဝဒေနာဖွဈခဲ့ရပွီး
မိဘဖွဈသူတှကေ သင်ျခနျးစာအဖွဈ နောကျနောငျဒီလိုမဖွဈစဘေို့ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့အထူးသတိပွုကွပေးကွဘို့ ရေးသားထားတာလေးကိုတှမေိ့လို့ မိဘတှရေော ဆရာ/မတှပေါသတိပွုစရာအဖွဈပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရခွငျးပါ….။From Sithu Maung’s FB လေးစားလြှကျcrd
စိတ်မကောင်းစရာပါ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ…..ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို
ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး …သိပ်မကြာဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် သိပ်မကြာပါဘူး ကလေးက သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။
ပုံမှန်ဘာရောဂါအခံမှလည်းမရှိဘူးလို့မိဘတွေကရေးသားထားပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့်သေဆုံးတာလဲလို့မည်သူမှမှတ်ချက်မပေးထားပါဘူး ။စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ယခုလို လိုက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနေလား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမ်းသပ်မိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊
ကလေးဟာအဖျားအနည်းငယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်. ၊ မကြာခင်သူ့မွေးနေ့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်..ဒါ့ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် , ရပ်ကွက်ထဲမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးကြရမယ်ဆိုရင်
ဆေးရဲ့ အာနိသင်နဲ့ Side – effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု တွေကိုအရင်လေ့လာပါတယ် ၊ကိုယ့်သားသမီးကခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်လား ? ဖျားနေသလားပေါ့… စိတ်ချမှထိုးခိုင်းပါတယ်
တစ်ချို့ကာကွယ်ဆေးတွေကအရမ်းပြင်းထန်တယ်လို့သိထားလို့ပါ ….ကိုယ်တွေက ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ Vaccine တွေအကြောင်းနားမှမလည်တာ ၊ ဒီတော့နီးစပ်ရာခင်မင်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေကို မေးရမြန်းရပါတယ်
သေချာမှထိုးခိုင်းပါတယ်….အခုတော့ ဆရာ/မတွေကလည်း တာဝန်ပေါ့လျာ့ကြသလို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်း သေချာမစစ်မိကြတော့ စေတနာကနေ သုံးဘက်စလုံးယူကျုံးမရ ဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရပြီး
မိဘဖြစ်သူတွေက သင်္ခန်းစာအဖြစ် နောက်နောင်ဒီလိုမဖြစ်စေဘို့ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြပေးကြဘို့ ရေးသားထားတာလေးကိုတွေ့မိလို့ မိဘတွေရော ဆရာ/မတွေပါသတိပြုစရာအဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းပါ….။From Sithu Maung’s FB လေးစားလျှက်crd
သူမကိုမတန်မရာ အနုပညာကြေးတွေပေးလာတဲ့အပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောကြားလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆုလှိုင်နှင်း
အမေစုပုံ၊ ဗီနိုင်း၊ စတစ်ကာများအား ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်လူငယ်များမှ ယနေ့ပြန်လည်ပြီး​​ဝန်ချတောင်းပန်ပါပြီ
ရန်ကုန်မြို့မှာရှိ​​​သော ကွမ်းယာဆိုင်များကို မနက်ဖြန်စတင်​ပြီး ပိတ်သိမ်းရမည်
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်​နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေဖြင့် BMW ဇိမ်ခံကားကြီးအားဝယ်ယူနိုင်ခဲ့​သော ​လေးစားစရာ​ကောင်​မ​လေး
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အငျတာနကျဖွတျခြိနျ ပွောငျးလဲ သတျမှတျလိုကျပွီ…